अर्बपति मन्त्री : करोडौंको शेयर, जग्गैजग्गा, घरैघर ! – Purba Aawaj
जनकपुरमा मतदानस्थल नजिक झ’ड’प, प्रहरीद्वारा अ’श्रु’ग्या’स प्रहार
खाडी गएकासँग प्रेम गर्नै हुन्न र?
२५ वर्षीय युवकको अनौठो डलर ध’न्दा, ३८ करोड रुपैयाँको मुद्दामा मुछियो परिवार
अस्पताल बनाउन ४० लाखको जग्गा दान गर्ने यी दम्पत्ति सम्मानित ! सम्मानको लागि सेर गरौ
मलाई मा’री’योस् मलाई कुनै प्रभा छैन् तर भष्टाचारीको भन्डाफोर गरेरै छाड्छु : मन्त्री प्रेम आले
प्रधानमन्त्रीले गरे देशभित्र मलकारखाना खोल्ने कुरा
अर्बपति मन्त्री : करोडौंको शेयर, जग्गैजग्गा, घरैघर !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १०, २०७८ समय: ७:०३:५५
९ भदौ, पोखरा । विश्वप्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गर्ने विश्वका डलर अर्बपतिहरुको सूचीमा नेपालका एक जना विनोद चौधरी मात्र छन् । नेपालमा पनि धेरै अर्बपतिहरु भएको चर्चा हुने गर्छ । त्यस्तै अर्बपति राजनीति क्षेत्रमै भेटिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले बुधबार सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा पनि अर्बपति हुन् । पोखराका घरजग्गा व्यवसायी थापाको पोखरा महानगरको प्राइम लोकेसन नयाँबजार, लेकसाइड र महेन्द्र पुलमा ६ वटा घर छन् । उनले करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर नयाँबजारमै पुरानो शैलीको घर बनाएका छन् ।
थापाको पोखरामा ३ वटा होटल तथा रिसोर्ट र २ वटा ब्यापारिक भवन रहेका छन् । उनले पोखरामा पोखरा बुटिक होटल प्रालि, बगैंचा रिसोर्ट र रोयल हिमालयन रिसोर्ट प्रालि सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तै सिटी ट्रेड मल, गण्डकी ट्रेड हाउस, अंशुभरा स्क्वायर प्रालिलगायतका व्यापारिक भवन पनि उनकै नाममा छ । पोखराकै ठूलो मल मध्यमा पर्ने पोखरा ट्रेड मलमा पनि उनको लगानी छ ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका थापा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । मेगा बैंकसँग मर्ज हुनु पहिले थापा पोखराको विश्व विकास बैंकका अध्यक्षसमेत थिए । थापा मेगा बैंकको संस्थापक शेयरधनी पनि हुन् ।
थापाको मेगा बैंकको ४ लाख, ६८ हजार ५६ कित्ता, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको ९१ हजार ३ सय ६७, सिद्धार्थ बैंकको ४३ हजार ७ सय ७८, लुम्बिनी विकास बैंकको ५० हजार ९ सय ९ कित्ता शेयर छ ।
यसैगरी मेगामै श्रीमती मनलक्ष्मी थापाको नाममा ५० हजार, राधा लक्ष्मी थापा क्षेत्रीको नाममा २७ हजार ३ सय ८१ र छोरा सौगात थापाको नाममा २६ हजार १ सय १६ कित्ता विभिन्न बैंकको शेयर छ ।
थापाले अधिकांश कारोबार श्रीमतीको नामबाट गर्ने गरेका छन् । उनको छोरा सौगात थापाको नाममा पनि व्यवसाय तथा जग्गा रहेको छ । सम्पत्ति विवरणमा थापाको पोखराका विभिन्न ठाउँमा १ सय १८ कित्ता जग्गा रहेको देखिएको छ ।
‘अटो मोबाइल र रियल स्टेट मेरो पुरानो व्यवसाय हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘मल बैंक, होटल, रिसोर्टमा लगानी गरेको छु ।’
थापाले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार ९० तोला सुन, १५ तोला हिरा र ५० तोला चाँदी उनीसँग छ । थापासँग २ करोड २५ लाख मूल्यका २ गाडी छन् । थापाले विभिन्न बैंकबाट करिब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको जागिर छाडेर अटो क्षेत्र हुँदै रियल स्टेट र विभिन्न व्यवसायबाट प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका थापा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि २०७३ सालबाट नेपाली कांग्रेसमा सक्रियता बढाएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको मेयर दाबी गरेका थापाले प्रदेश सभाको टिकट हात पारेका थिए ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख)मा माओवादीका प्रभावशाली नेतामै पर्ने राजकाजी गुरुङ ‘करण’लाई हराउँदै थापा कास्कीमा कांग्रेसबाट जित्ने एकमात्र सांसद बने । त्यसपछि झन् थापाको राजनीतिमा पनि प्रभाव थपिएको थियो ।
तनहुँका पाका कांग्रेस नेता डोबाटे विक मन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि उनको सट्टा विन्दुलाई मन्त्री बनाएको भनी कांग्रेसको आलोचना भएको थियो ।
हेर्नुहोस्, थापाको सम्पत्ति विवरण
अन्लाईन खबर बाट
Last Updated on: August 26th, 2021 at 7:03 am
६५५ पटक हेरिएको
मन्त्री आलेद्वारा पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता र’द्द
४.	मृ,त्यु भएकाहरुकाे किर्ते कागज बनाएर वृद्धाभत्ता खाएकाे भन्दै वडाध्यक्ष र सचिवलाई कालाेमाेसाे
५.	बुबाको लाश लिएर मलामी गएका तिन जना छोराको बस दुर्घटना हुदा एकै साथ मृत्यु
६.	नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोह समातियो
७.	यी उपसचिवको २२ वर्षमा ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ वटा बैंकमा पैसा
८.	दुई साता अघिदेखि ज्वरो, रुघाखोकीले ग्रस्त पत्रकार एलबी विश्वकर्माको निधन
९.	पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस १८ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
जनकपुरमा मतदानस्थल नजिक झ’ड’प, प्रहरीद्वारा अ’श्रु’ग्या’स प्रहार January 26, 2022
खाडी गएकासँग प्रेम गर्नै हुन्न र? January 26, 2022
२५ वर्षीय युवकको अनौठो डलर ध’न्दा, ३८ करोड रुपैयाँको मुद्दामा मुछियो परिवार January 26, 2022
अस्पताल बनाउन ४० लाखको जग्गा दान गर्ने यी दम्पत्ति सम्मानित ! सम्मानको लागि सेर गरौ January 26, 2022
मन्त्री आलेद्वारा पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता र’द्द January 26, 2022